Wasiirka Warfaafinta ee XFS oo ka hadlay Suxufiyiinta ku xiran Ethiopia iyo Somaliland. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Wasiirka Warfaafinta ee XFS oo ka hadlay Suxufiyiinta ku xiran Ethiopia iyo Somaliland.
Wasiirka Warfaafinta ee XFS, Eng. C/raxmaan Cumar Cusmaan “Yariisow” ayaa hadalkaasi ka sheegay mar uu maanta ka qeyb galay Munaasabad loogu dabaal degayey Maalinta Saxaafadda Caalamka oo lagu qabtay magaalladda Muqdisho.
Wasiirka waxa uu ku bogaadiyey Suxufiyiinta dadaalka iyo dulqaadka ay ugu adeegayaan Mujtamaca Soomaalida, wuxuuna ku booriyey inay sii kordhiyaan Wacyi-gelinta Ummadda iyo Horumarinta Saxaafadda Somalia.
Wasiir Yariisow waxa uu Khudbadiisa ku soo qaatay dadaalka ay XFS ugu jirto sidii loo soo dayn lahaa Suxufiyiinta Soomaalida ee ku xiran dalka Ethiopia iyo kuwa kale ee ku xiran Hargeysa.
“Dadaal baan u geli doonaan sidiiay Dowladda Ethiopia ugala hadli lahaayeen sidii loo sii dayn lahaa Suxufiyiintaasi, wuxuuna rajo ka muujiyey in lagu guuleysan doono dadaalkaasi.
Dhinaca kale, Ergayga Gaarka ee QM ugu qaabilsan Arrimaha Somalia, Michael Keating iyo Shaqaalaha Xafiiska QM waxay Suxufiyiinta Soomaalida kala qeyb galeen Munaasabadda Maamlinta Xorriyadda Saxaafadda Caalamka oo sannad kasta lagu xuso Bisha May 3-da oo maanta oo kale ah.
(Sawiro): Qaabka Madaxweyne Farmaajo loogu soo dhaweeyey Addis Abeba.